China ubushushu obuphezulu bandise i-perlite yokuthengisa kunye neFektri | Xinzheng
I-perlite eyandisiweyo luhlobo lwezinto ezimhlophe eziyimbumba kunye nesakhiwo se-honeycomb ngaphakathi, esenziwe ngokutshisa i-perlite ore emva koko ukugcoba nokwanda kubushushu obuphezulu kwangoko. Umgaqo wokusebenza kwe-Perlite eyandisiweyo yile: ulwakhiwo kunye nokwandiswa kwevolumu amaxesha angama-10 ukuya kwe-30 kwimveliso yezimbiwa ezingezizo ezentsimbi. I-Perlite yahlulwe yaziifom ezintathu ngokokwanda kwetekhnoloji kunye nokusetyenziswa: iseli evulekileyo, iseli evaliweyo, kunye nebhaluni.
Ukwaziswa kweplite eyandisiweyo
I-perlite eyandisiweyo luhlobo lwezinto ezimhlophe eziyimbumba kunye nesakhiwo se-honeycomb ngaphakathi, esenziwe ngokutshisa i-perlite ore emva koko ukugcoba nokwanda kubushushu obuphezulu kwangoko. Umgaqo wokusebenza kwe-Perlite eyandisiweyo yile:℃), Amanzi kwi-ore ngumphunga kwaye ayanda ngaphakathi kwe-vitreous ore ethambileyo ukwenza ubumbeko kunye nokwandiswa kwevolumu amaxesha angama-10 ukuya kuma-30 kwimveliso yezimbiwa ezingezizo ezentsimbi. I-Perlite yahlulwe yaziifom ezintathu ngokokwanda kwetekhnoloji kunye nokusetyenziswa: iseli evulekileyo, iseli evaliweyo, kunye nebhaluni.
Ukusetyenziswa kwePerlite eyandisiweyo
I-perlite eyandisiweyo yinto yezimbiwa engaqhelekanga enoluhlu olubanzi kakhulu lokusetyenziswa. I-perlite eyandisiweyo kukuthintela umlilo, ukufudumeza ubushushu, ukufunxa isandi kunye nokugquma kwesandi, ubunzima bokukhanya kunye neepropathi zamandla aphezulu zibandakanya phantse onke amasimi. Umz:
2.Isetyenziselwa ukuhluza utywala, ioyile, amayeza, ukutya, ilindle kunye nezinye iimveliso.
3.Used irabha, ipeyinti, ukutyabeka, iiplastiki, kunye nezinye izinto ezizalisa kunye nezandisi.
I-4 isetyenziselwa ukwenziwa kwentsimbi kunye nokususwa kwe-slag, ukugquma kwesinyithi kunye nokugubungela. Umgangatho ophezulu wokuzaliswa kweepads zokuqhekeza iimoto.
5.Used ukufunxa oyile edadayo, indawo yeoli cementing arhente umbane, kunye ephantsi mninzi isamente oluludaka.
6. Isetyenziswa kwezolimo, ukulima izityalo, ukuphucula umhlaba, ukugcinwa kwamanzi nezichumiso.
7.Used ukusebenzisana nezincamathelisi ezahlukeneyo ukwenza iinkangeleko zeenkcukacha ezahlukeneyo kunye nokwenziwa.
Isetyenziselwa ukufakela umlilo, ukufunxa isandi kunye nokugquma kwesandi kweziko kunye nezakhiwo.
Ukucaciswa kwePerlite eyandisiweyo
Ubukhulu: 0-0.5mm, 0.5-1mm, 1-2mm, 2-4mm, 4-8mm, 8-30mm.
Ukukhululeka kovalo: 40-100kg / m3, 100-200 kg / m3, 200-300 kg / m3.
I-perlite eyandisiweyo ingaqwalaselwa kwaye iveliswe ngokungqinelana nezalathi zomthengi.
Egqithileyo Isixa esivaliweyo sePerlite yesisele sokuNqanda i-Thermal
Okulandelayo: bathenge iHorticultural Perlite isambuku sabalimi bezorhwebo